Tag: waxyaabaha iibka ah » Martech Zone
Tag: waxyaabaha iibka
Tuesday, May 12, 2020 Khamiista, Oktoobar 1, 2020 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 4 daqiiqo Marka ay meheraddaadu ka baxdo kooxaha iibka, waxaad ogaan doontaa in raadinta nuxur wax ku ool ahi uu noqdo baahi habeennimo ah. Kooxaha horumarinta ganacsiga waxay raadiyaan waraaqo caddaan ah, daraasad kiis, dukumiintiyo xirmo, soo bandhigid wax soo saar iyo adeeg… waxayna rabaan inay u habeeyaan warshadaha, biseylka macmiilka, iyo cabirka macaamiisha. Waa maxay Waxtarka Iibinta? Waxtarka iibintu waa habka istiraatiijiga ah ee lagu qalabeeyo ururada iibka qalab sax ah, nuxur ahaan, iyo macluumaad si guul leh loogu iibiyo Waxay awood siineysaa iibka
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo In kasta oo tikniyoolajiyadda karti-siinta iibka la caddeeyay inay kordhiso dakhliga 66%, 93% shirkadaha wali ma aysan hirgelin barmaamij awood u leh iibinta Tani waxay badanaa u sabab tahay khuraafaadka waxtarka iibka oo qaali ah, dhib badanna la geeyo oo leh heerar korsasho oo hooseeya. Kahor intaanan u dhex galin faa iidooyinka barmaamijka kaabaya iibinta iyo waxa ay qabato, aan marka hore u daadagno waxa karti u leh iibintu iyo maxay muhiim u tahay. Waa Maxay Iibinta Waxtarka? Sida laga soo xigtay Forrester Consulting,
Isniin, February 20, 2017 Isniin, February 20, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Toddobaadyadan la soo dhaafay, waxaan falanqeynaynay dhammaan waxyaabaha macaamiisheenna ka kooban si loo aqoonsado waxyaabaha keenaya wacyiga ugu badan, ka-qaybgalka, iyo beddelaadda. Shirkad kasta oo rajo ka qabta inay hanato ama ku kobciso ganacsigooda khadka tooska ah waa inay lahaadaan waxyaabo. Kalsoonida iyo maamulka oo ah labo fure go'aan kasta oo iibsasho iyo nuxur ahaanta ayaa ku kallifa go'aannadaas khadka tooska ah. Taasi waxay tiri, waxay u baahan tahay oo keliya inaad si dhakhso leh u eegto falanqayntaada ka hor intaadan ogaanin taas
Arbacada, Agoosto 17, 2016 Monday, August 22, 2016 John-Henry Scherck
Waqtiga Akhrinta: 4 daqiiqo Iibka, warshad ahaan, si xawli ah ayuu isu beddelayaa. Kooxaha wax iibiya marwalba waxay awoodeen inay horumar istiraatiijiyadeed oo dheeri ah ku sameeyaan geeddi-socodkooda, laakiin dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iibku wuxuu galay xilli cusub oo ay sii hurisay teknolojiyadda, falanqaynta iyo isbeddel baaxad leh oo ku yimid hab-dhaqanka iibsadaha. Maamulayaasha iibku waxay diiradda saareen isticmaalka tikniyoolajiyadda si ay u cabbiraan waxqabadka iibka iibinta iyo hagaajinta hawlgallada iyagoo u maraya falanqeyn tiro iyo tijaabooyin ku saabsan xeeladaha iyo istiraatiijiyadda. Hadaad isbarbar dhigto a
11 Dariiqo oo lagu Kordhiyo ROI ee Suuqgeynta Mawduucaaga
Talaado, Disembar 1, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay inay infographic noqon karto hal talo weyn… akhristayaasha u oggolow inay beddelaan! Dhab ahaan, waxaan xoogaa wareersan nahay inta shirkadood ee qoraya waxyaabaha dhexdhexaadka ah, oo aan falanqeyneynin saldhigooda macaamiishooda, iyo horumarin la'aanta xeelado muddo dheer ah oo loogu talagalay akhristayaasha macaamiisha. Waxaan u tagayaa cilmi baaris tan tan waxaa leh Jay Baer oo cadeeyay taas. Ku dar tan iyadoo ay taasi jirto. Labadaas tiro waxay tilmaamayaan sida ay muhiimka u tahay in waxbadan la qarash gareeyo